SomaliTalk.com » Wasiirka Garsoorka & Datuurka: “Horumar weyn baa laga sameeyey nidaamka Dib u eegista Dastuurka Somalia.”
Mogadishu, 19 June 2014 – Wasiirka Garsoorka & Dastuurka Mudane Farah Sheikh Abdulkadir, ayaa maanta soo dhoweeyey ansixinta baarlamaanka ay ansixiyeen Guddiga Madaxa Bannaan ee Dib u eegista iyo Hirgelinta Dastuurka. 134 xildhibaan baa ansixiyey, halka 9 ay diideen, 10 xildhibaana ay ka aamuseen. Wasiirka ayaa yiri “Horumar weyn baa laga sameeyey nidaamka Dib u eegista Dastuurka Somalia.”
Wasiir Farah Sheikh Abdulkadir oo warbaahinta la hadlayey ayaa yiri “Dowladdu waxey aaminsantahay in Qorshaha Dib u eegista Dastuurka uu noqdo mid ay Soomaalidu hoggaamineyso, si ay u lahaato qorshaha, oo muhiim u ah sharciyadda iyo guulaha dib u eegista Dastuurka Soomaaliyeed. Dowladda waxaa ka go’an in la hirgeliyo Tiigsiga 2016, oo ay ka mid yihiin Dib u eegista Dastuurka, Dhaqangelinta Federaalka iyo hirgelinta Dimoqraadiyeynta dalka, si dalka looga hirgeliyo doorashooyin sanadka 2016ka. Dib u eegista Dastuurka waa aasaaska Tiigsiga 2016. Marka la dhameystiro Dib eegista Dastuurka, waxaa jiri doono cod loo qaado shacabka (referendum). Ka hor codeynta waxaa jiri doono barnaamijyo is-xig-xiga oo ay ka mid yihiin wacyigelin, la tashiyo shacabka lala sameynayo, waxbarasho, doodo iyo is faham keeni kara in shacabku ay fahmaan Dastuurkooda.
Wasiirka Garsoorka & Dastuurka ayaa sidoo kale sheegay “Dowladda Federaalku wey ka go’antahay in nidaamkan uu noqdo mid furfuran, hufan oo si isla xisaabtan ah loo fulinayo. Sidaas daraadeed, waxaa muhiim ah in Soomaalidu ay ka qeyb-qaataan qorshahan muhiimka ah, si qorshahu u noqdo mid shacabku iska leeyahay oo guuleysta. Waxaana ugu baaqayaa dhammaan in la taageero qorshahan dib u eegista Dastuurka oo muhiim weyn noo leh, naguna horseedaya inaan dalka ka qabano doorsahooyin sanadka 2016.”